भोकले व्यथित भुइँमान्छेहरू « janaaasthanews
प्रकाशित मिति : 31 March, 2020 1:57 pm
कोरोना भाइरसको सन्त्रासले सिंगो देश नै लकडाउन भएर घरबाहिर समेत निस्कन नपाइरहेको अवस्थामा मानिसहरूको कामकाज ठप्पप्रायः छ । हुने खानेलाई त पीर भएन, हुँदा खानेका लागि चिन्ता थपिएको छ । दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर खाने विपन्न परिवारको तथ्याङ्क संकलन गरेर उनीहरूलाई खाद्यान्न सहयोग गर्ने सरकारको प्रयास छ । घर हुनेहरूको त तथ्याङ्क आउला, जसको घरै छैन, उनीहरूलाई के गर्ने ?
सधैंजसो नारायणगढमै देखिने ३३ वर्षीय दिपककुमार विश्वकर्मा सोमबार पुलचोकमा भेटिए । लकडाउन भएयता भात खान नपाएर भोकभोकै बस्नुपरेको पीडा उनले पनि सुनाए । पानी खाएर पेट भरिरहेको उनी बताउँछन् । गैंडाकोटमा गोठजस्तो घरमा एक्लै भाडामा बस्ने गरेको बताउने उनलाई सधैं उही मैलो कपडामा देखेर पुलचोक निवासी शिखर पियाले आफ्ना केही पाइन्ट र ज्याकेट दिए । बताइएअनुसार घर बनाउने काम गर्ने विकले दिनको ५०० रुपैयाँ कमाउँथे । आफैं भुसे चुलोमा पकाएर खान्थे । पहिला कमाएको पैसा जम्मा गरेको छैन ? भनी सोध्दा ‘छैन’ भन्दै उनले भने, ‘काममा लगाएर कतिले पैसा दिन्थे, कतिले दिँदै दिएनन् ।’ कृष्ण विश्वकर्मा नाम गरेका ठेकेदारले एक वर्षजति काम लगाएर पैसा नदिएको उनको भनाइ थियो । ‘अहिले पैसा पनि छैन, चामल, दाल केही पनि छैन’, उनले भने, ‘खुलेपछि त काम पाइहाल्छ, अहिलेचाहिँ भोकभोकै भइयो ।’